WWW.FIDULINK.COM > အွန်လိုင်းကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းတွင် online ကုန်းတွင်းသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများဖန်တီးမှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် Expert Legal Firm > နိုင်ငံအလိုက်ဒီမိုကရေစီအညွှန်းကိန်း! 2020 အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း! အသစ်
ကမ္ဘာပေါ်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီ၊ ဌာနခွဲ (သို့) လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်ရွေးချယ်ရာတွင်သင့်အားကူညီနိုင်သောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအကြောင်းဇယားကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
ဤအညွှန်းကိန်းသည် ၁၀ ခုအနက်မှ ၄ နိုင်ငံကိုခွဲခြားနိုင်သည်။
၆ မှ ၈ ကြားအညွှန်းကိန်းရှိသောမစုံလင်သောဒီမိုကရေစီများ၊
၄ မှ ၆ ကြားအညွှန်းကိန်းရှိသော hybrid အစီအစဉ်များ၊
အညွှန်းကိန်း4ထက်နည်းသောအာဏာရှင်အစိုးရများ။
2 ကျွန်း 9,58 10 9,29 8,89 10 9,71
3 တရားစွဲ 9,39 9,58 9,64 8,33 10 9,41
4 နယူးဇီလန် 9,26 10 9,29 8,89 8,13 10
6= ကေနဒါ 9,15 9,58 9,64 7,78 8,75 10
8 ဖင်လန် 9,14 10 8,93 8,33 8,75 9,71
9 Australis 9,09 10 8,93 7,78 8,75 10
10 ဆွစ်ဇာလန် 9,03 9,58 9,29 7,78 9,38 9,12
11 -Bas ပေးဆောင် 8,89 9,58 9,29 8,33 8,13 9,12
12 လူဇင်ဘတ် 8,81 10 8,93 6,67 8,75 9,71
14 ဗြိတိန်နိုင်ငံ 8,53 9,58 7,5 8,33 8,13 9,12
15 ဥရုဂွေး 8,38 10 8,57 6,11 7,5 9,71
16 သြစတြီးယား 8,29 9,58 7,86 8,33 6,88 8,82
18 မော်လ်တာ 8,21 9,17 8,21 6,11 8,75 8,82
20 ကော့စတာရီကာ 8,07 9,58 7,5 6,67 7,5 9,12
21 Core du Sud 8 9,17 7,86 7,22 7,5 8,24
22 ဂျပိုနစ် 7,99 8,75 8,21 6,67 7,5 8,82
23 = ငရုတ်သီး 7,97 9,58 8,57 4,44 8,13 9,12
23 = အက်စ်တိုးနီးယား 7,97 9,58 8,21 6,67 6,88 8,53
25 ဆောင်သော-Unis 7,96 9,17 7,14 7,78 7,5 8,24
26 ကိပ်ဗာဒီ 7,88 9,17 7,86 6,67 6,88 8,82
27 ပေါ်တူဂီ 7,84 9,58 7,5 6,11 6,88 9,12
28 ဘော့ဆွာနာ 7,81 9,17 7,14 6,11 7,5 9,12
29 ပြင်သစ် 7,8 9,58 7,5 7,78 5,63 8,53
30 ဣသရလေ 7,79 9,17 7,5 8,89 7,5 5,88
32 ထိုင်ဝမ် 7,73 9,58 8,21 6,11 5,63 9,12
33 အီတလီ 7,71 9,58 6,07 7,78 6,88 8,24
34 ချက်သမ္မတနိုင်ငံ 7,69 9,58 6,79 6,67 6,88 8,53
35 ဆိုက်ပရပ်စ် 7,59 9,17 6,43 6,67 6,88 8,82
36 = Lituanie 7,5 9,58 6,43 6,11 6,25 9,12
36 = ဆလိုဗေးနီး 7,5 9,58 6,79 6,67 6,25 8,24
41 အိန္ဒိယ 7,23 9,17 6,79 7,22 5,63 7,35
42 အရှေ့တီမော 7,19 9,08 6,79 5,56 6,88 7,65
43 ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို 7,16 9,58 7,14 6,11 5,63 7,35
45 ပနားမား 7,05 9,58 6,07 6,6757,94
46 ဘူလ်ဂေးရီးယား 7,03 9,17 6,43 7,22 4,38 7,94
47 = Jamaïque 7,02 8,75 7,14 4,44 6,25 8,53
47 = အာဂျင်တီးနား 7,02 9,17 5,36 6,11 6,25 8,24
49 ဆူရာနမ် 6,98 9,17 6,43 6,6757,65
50 ဘရာဇီး 6,97 9,58 5,36 6,6758,24
51 ကိုလံဘီယာ 6,96 9,17 6,7955,63 8,24
53 ဖိလစ္ပုိင္ 6,71 9,17 5,71 7,22 4,38 7,06
54 = ပိုလန် 6,67 9,17 6,07 6,11 4,38 7,65
54 = ဂိုင်ယာနာ 6,67 9,17 5,71 6,1157,35
56 လီဆိုသို 6,64 9,1756,67 5,63 6,76
57 = ဟန်ဂေရီ 6,63 8,75 6,0756,25 7,06
57 = ဂါနာ 6,63 8,33 5,71 6,67 6,25 6,18
61 ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ 6,54 9,17 5,36 6,1157,06
63 = ဆားဘီးယား 6,41 8,25 5,36 6,1157,35
63 = တူနီးရှား 6,41 6,42 5,71 7,78 6,25 5,88
65 အင်ဒိုနီးရှား 6,39 6,92 7,14 6,67 5,63 5,59
66 = ရိုမေးနီးယား 6,38 9,17 5,7154,38 7,65
66 = Singapour 6,38 4,33 7,86 6,11 6,25 7,35
69 နမီးဘီးယား 6,25 5,67 5,36 6,67 5,63 7,94
70 ပါရာဂွေး 6,24 8,75 5,7154,38 7,35
71 = Mexique 6,19 8,33 6,07 7,22 3,13 6,18
71 = သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ 6,19 7,83 5,7156,25 6,18
73 = ဟောင်ကောင် 6,15 3,08 6,07 5,56 7,5 8,53
73 = Sénégal 6,15 7,5 6,07 4,44 6,25 6,47
75 ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ 6,03 6,92 6,07 3,89 5,63 7,65
76 အယ်လ်ဘေးနီးယား 5,9874,71 5,5657,65
77 ဆာဗေးဒေါ 5,96 9,17 4,29 5,56 3,75 7,06
78 မက်ဆီဒိုးနီးယား 5,87 6,5 5,36 6,67 3,75 7,06
79 = မော်လ်ဒိုဗာ 5,85 7,08 4,64 6,11 4,38 7,06
79 = ဖီဂျီ 5,85 6,58 5,36 6,11 5,63 5,59
81 = မွန်တီနီဂရိုး 5,74 6,08 5,36 6,11 4,38 6,76
81 = ဘီနင် 5,74 6,5 5,7155,63 5,88
83 ဘိုလီးဗီးယား 5,7 7,5 4,64 5,56 3,75 7,06
84 ယူကရိန်း 5,69 6,17 3,21 6,67 6,25 6,18
85 ဟွန်ဒူးရပ်စ် 5,63 8,5 4,64 4,44 4,38 6,18
86 ဇမ်ဘီယာ 5,61 6,17 4,64 3,89 6,88 6,47
87 ဂွာတီမာလာ 5,6 7,92 5,36 3,89 4,38 6,47
88 ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ 5,57 7,83 5,07 5,56 4,38 5
89 ဂျော်ဂျီယာ 5,5 7,83 3,57 6,11 4,38 5,59
90 မာလာဝီ 5,49 6,58 4,29 4,44 6,25 5,88
91 = မာလီ 5,41 7,42 3,93 3,89 5,63 6,18
91 = တန်ဇန်းနီးယား 5,417555,63 4,41
93 လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ 5,35 7,42 2,57 5,56 5,63 5,59
95 ဒါဂတ်စကာ 5,22 6,08 3,57 6,11 5,63 4,71
97 နီပေါ 5,18 4,33 5,3655,63 5,59
98 = ကာဂျစ္စတန် 5,11 6,58 2,93 6,67 4,38 5
98 = ကင်ညာ 5,11 3,5 5,36 6,67 5,63 4,41
101 ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား 4,98 6,5 2,93 5,56 3,75 6,18
102 ဟေတီ 4,91 5,58 2,93 3,89 6,25 5,88
103 အာမေးနီးယား 4,79 5,67 4,64 5,56 2,5 5,59
105 ဆီယာရာလီယွန် 4,66 6,58 1,86 3,33 6,25 5,29
106 = ထိုင်း 4,6334,2955 5,88
106 = လေဗနုန်တော 4,63 3,92 2,21 6,67 5,63 4,71
108 နိုင်ဂျီးရီးယား 4,44 6,08 4,64 3,33 3,75 4,41
109 ပါလက်စတိုင်း 4,39 3,83 2,14 7,78 4,38 3,82
110 ကြက်ဆင် 4,37 4,55552,35
111 ဂမ်ဘီယာ 4,31 4,48 4,29 3,33 5,63 3,82
112 ပါကစ္စတန် 4,17 6,08 5,36 2,22 2,5 4,71
113 Cote d'Ivoire 4,15 4,83 2,86 3,33 5,63 4,12
114 အီရတ် 4,06 4,75 0,07 6,6753,82
115 ယော်ဒန်မြစ် 3,93 3,58 4,29 3,89 4,38 3,53
116 = မိုဇမ်ဘစ် 3,85 3,58 2,1455 3,53
116 = Koweït 3,85 3,17 4,29 3,89 4,38 3,53
120 နိုင်ဂျာ 3,76 5,25 1,14 3,33 4,38 4,71
122 နီကာရာဂွာ 3,63 2,67 1,86 3,89 5,63 4,12
123 အင်ဂိုလာနိုင်ငံ 3,62 1,75 2,86 5,5652,94
127 အဲဂုတ္တုပြည်၌ 3,36 3,58 3,21 3,33 3,75 2,94
128 = ရဝမ်ဒါ 3,35 1,6752,78 4,38 2,94
128 = အီသီယိုးပီး 3,3503,57 5,5652,65
131 ကွန်ဂို (ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ) 3,31 3,17 2,5 3,89 3,75 3,24
132 ကင်မရွန်း 3,28 3,17 2,86 3,33 4,38 2,65
133 ကာတာနိုင်ငံ 3,1904,29 2,22 5,63 3,82
134 = ဗင်နီဇွဲလား 3,16 1,67 1,79 4,44 4,38 3,53
134 = ဇင်ဘာဘွေ 3,16 0,524,44 5,63 3,24
136 ဂီနီ 3,14 3,5 0,43 4,44 4,38 2,94
137 ဘယ်လာရုစ် 3,13 0,92 2,86 3,89 5,63 2,35
138 တိုဂို 3,1 3,17 0,79 3,3353,24
139 ဗီယက်နမ် 3,0803,21 3,89 5,63 2,65
140 အိုမန် 3,0403,93 2,78 4,38 4,12
141 ဆွာဇီလန် 3,03 0,92 2,86 2,22 5,63 3,53
142 ကျူးဘား31,08 3,57 3,33 4,38 2,65
143 အာဖဂန်နစ္စတန် 2,97 2,92 1,14 4,44 2,5 3,82
144 = Russie 2,94 2,17 1,7952,5 3,24
144 = ကာဇက်စတန် 2,94 0,5 2,14 4,44 4,38 3,24
146 ဂျီဘူတီနိုင်ငံ 2,87 0,42 1,79 3,89 5,63 2,65
147 ယူအေအီး 2,7603,93 2,2252,65
148 ဘာရိန်း 2,71 0,83 3,21 2,78 4,38 2,35
149 အဇာဘိုင်ဂျန် 2,65 0,5 2,14 3,33 3,75 3,53
150 အီရန် 2,4503,21 4,44 3,13 1,47
151 = လာအိုနိုင်ငံ 2,37 0,83 2,86 1,6751,47
151 = အီရီထရီးယား 2,3702,14 1,67 6,88 1,18
153 ဘူရွန်ဒီ 2,3300,43 3,8952,35
154 လစ်ဗျားနိုင်ငံ 2,19 1 0,36 1,6752,94
156 ဥဇဘက် 2,01 0,08 1,86 2,2250,88
157 ဂီနီဘစ် 1,98 1,6702,78 3,13 2,35
158 ယီမင် 1,9500 3,8950,88
159 = ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံ 1,9302,86 2,22 3,13 1,47
159 = Tadjikistan 1,93 0,08 0,79 1,67 6,25 0,88
161 အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ 1,9200,43 3,33 4,38 1,47
162 တာ့ခ်မင်နစ္စတန် 1,7200,79 2,2250,59
163 ချဒ် 1,6100 1,67 3,75 2,65
164 ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ 1,52 2,2501,11 1,88 2,35
165 RépubliqueDémocratique du ကွန်ဂို 1,49 0,5 0,71 2,22 3,13 0,88
166 ဆီးရီးယား 1,4300 2,78 4,38 0
167 မြောက်ကိုရီးယား 1,0802,5 1,67 1,25 0